मैले किन्देको चप्पल, जुत्ता र मोजा लगाउने तिमी
जिब्राको स्वाद फेर्न
मकहाँ पार्टीमा आउने तिमी
हेर त आज -
मलार्इ मेरै नोटहरू देखाएर
गिज्यार्इरहेछ - 'तिमीभन्दा हाम्रो मालिक धनी !'
विदेशमा सामान लिन जाँदा मैले
सेकेण्ड ह्यान्ड पसलमै किन्देको भएपनि
ल्याइदिएको उहापाहार - घडि
कति बर्ष चलाथ्यौ तिमीले ?
टमक्क परेको रोलेक्स
मेरो नाडीको घडि हेर्दै,
जिब्रो टोक्दैछ - छिः कस्तो घडि बाँधेको ?
जुत्ता फाट्दा तिम्रा
गोजी रित्तिन्थे मेरा
पाइजामा, सुरूवाल र भादगाउँले टोपी समेत
ब्यवस्था गर्नुपर्थ्यो मैले ।
हेर त आज,
तिम्रा पहिरनहरू कति ब्रान्डेड,
एक्स तिम्रा काँखी र जाँघहरूमा !
'नेता हुँ, सेवा गर्छु देश र जनताको' - भन्ने तिमी
'विकास र समृद्दी दिन्छु' - भन्ने तिमी
सबै सबै देखेपछि परिवर्तन तिमीमा
मलार्इ भन्न कर लाग्छ -
देशको ब्यापार गर्ने
आखिर कस्तो ब्यापारी तिमी ?